Ruushka ayaa ku daray duullimaadyo cusub oo Talyaani ah, Vietnam, Azerbaijan, Kyrgyzstan iyo Kazakhstan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Ruushka ayaa ku daray duullimaadyo cusub oo Talyaani ah, Vietnam, Azerbaijan, Kyrgyzstan iyo Kazakhstan
Airlines • Airport • Aviation • Wararka Azerbaijan • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Italy War Deg Deg Ah • Wararka Kazakhstan • Wararka Kyrgyzstan • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Jabinta Vietnam
Ruushka ayaa ku daray duullimaadyo cusub oo Talyaani ah, Vietnam, Azerbaijan, Kyrgyzstan iyo Kazakhstan.
Duulimaadyada Rome ee ka imanaya gegida diyaaradaha ee Zhukovsky waxay shaqayn doonaan laba jeer todobaadkii iyo ka Moscow ilaa magaalooyinka Vietnam ee Ho Chi Minh City iyo Nha Trang sidoo kale laba jeer todobaadkii.
Ruushku waxa uu kordhiyey soo noqnoqoshada Vietnam, Kyrgyzstan, Kazakhstan iyo Azerbaijan laga bilaabo 1da Diseembar.
Tirada duullimaadyada Baku, Azerbaijan ee ka imanaya Moscow, Russia waxay kori doonaan 14 wiiggii.
Waxaa suurtogal ah in todobaadkii saddex jeer laga duulo garoonka Zhukovsky ilaa Nur-Sultan, Alma-Ata iyo Shymkent, Kazakhstan.
Xarunta qalalaasaha ee ka hortagga coronavirus-ka ee Ruushka ayaa maanta ku dhawaaqday in Xiriirka Ruushka uu kordhin doono inta jeer ee duulimaadyada la qorsheeyay ee Italy, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Kazakhstan iyo Vietnam laga bilaabo Disembar 1, 2021.
Duulimaadyada Rome ka Garoonka diyaaradaha ee Zhukovsky Waxay shaqayn doontaa laba jeer toddobaadkii iyo laga bilaabo Moscow ilaa magaalooyinka Vietnam ee Ho Chi Minh City iyo Nha Trang sidoo kale laba jeer toddobaadkii.
Mas'uuliyiinta Ruushka ayaa sidoo kale oggolaaday in ay hal duulimaad ka bilaabaan Zhukovsky ilaa Bishkek iyo Osh ee Kyrgyzstan, iyo sidoo kale hal duulimaad toddobaadkiiba Issyk-Kul oo ka imanaya garoon kasta oo Ruush ah oo u furan taraafikada hawada caalamiga ah.
Tirada duullimaadyada Baku ee ka imanaya Moscow waxay kori doonaan 14 wiiggii, iyo garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka kale waxay u furan yihiin duulimaadyo caalami ah - illaa laba toddobaad toddobaadkii.
Waxa kale oo suurtogal ah in todobaadkii saddex jeer laga duulo madaarka Zhukovsky ilaa Kazakhstan Nuur-Sultan, Alma-Ata iyo Shymkent, oo ka yimid garoomada Ruushka ee Yekaterinburg, Krasnodar, Sochi, Orenburg iyo Mineralnye Vody - Nur-Sultan iyo Alma-Ata (hal duulimaad todobaadkii). Sidoo kale, duullimaadyo isku mid ah ayaa la oggol yahay inta u dhaxaysa Nuur-Sultan iyo Krasnoyarsk, iyo sidoo kale Alma-Ata iyo St. Petersburg, Omsk, Ufa iyo Rostov-on-Don.
Xarunta qalalaasuhu waxay sidoo kale ogolaatay hal duulimaad todobaadkii Moscow, St. Petersburg, Kazan ilaa Aktobe, ka St. Petersburg, Yekaterinburg iyo Rostov-on-Don - Aktau, ka St. Petersburg, Rostov-on-Don, Krasnodar iyo Sochi - Atyrau. Wadooyinka dheeraadka ah waxaa sidoo kale ka mid ah Moscow - Ust-Kamenogorsk, St. Petersburg - Petropavlovsk iyo Rostov-on-Don - Karaganda (hal duulimaad todobaadkii).